I-Astronomy - Isimo Sezulu ku-Net | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isayensi yezinkanyezi Kuyisihloko esijabulisa ngempela esingasoze sasimangaza nsuku zonke. Yisayensi efunda izinkanyezi, amaplanethi nayo yonke indawo jikelele. I-etymology yayo isho ukuthi "Stargazing." Lezi zindikimba zasezulwini zigcinwa nsuku zonke kusuka eMhlabeni yizazi zezinkanyezi nososayensi abafuna ukuchaza ukwakheka kwendawo yonke nokusebenza kwayo.
Kunezindlela eziningi zokubheka ukwazi ukuma, ukwakheka nokunyakaza kwezindikimba zasezulwini. Iningi lezifundo ezenziwayo zigxile ekutheni zingayithinta kanjani iplanethi yethu.
Impucuko endala ichaza isayensi yezinkanyezi neminye imibuzo ephathelene nezinganekwane, izithixo nezinkolelo zenkolo. Lokhu kungenxa yohambo olude olwenziwe. Ngenxa yokuthuthuka kwezobuchwepheshe nolwazi, kuyaziwa ukuthi uMhlaba ungomunye nje umzimba wasezulwini nokuthi asiyona inkaba yendawo yonke. Indawo yonke ayinamkhawulo futhi yakhiwe yimithala, amalanga, izinkanyezi, amaplanethi amaningi, izinyanga, ama-meteorite, uthuli, imikhondo kanye nama-asteroid.
Isibonakude sinikelwe ngu Galileo Kwakungenye yezinsimbi ezisiza kakhulu ku-Astronomy. Namuhla, ngokuthuthuka kobuchwepheshe, izimpendulo ezicacile zinganikezwa ngemvelaphi yendawo yonke kanye nenkathi yezindikimba zasezulwini. Izazi zezinkanyezi zinikele ngolwazi olubalulekile kwisayensi yeplanethi yethu futhi ziyaqhubeka nokusebenzisa indlela efanayo yokubuka.
Ngokuvamile bathola usizo lwezezimali kuhulumeni, ukutshalwa kwemali kwabo okubizayo kusekelwa yizikhungo ezibhekele ukuthengwa nokusungulwa kwamathuluzi athuthukayo kanye nokukhokha nokwakhiwa kwezikhungo eziyinkimbinkimbi zocwaningo ezinjengalezi: NASA.
Kulesi sigaba ungajabulela futhi ufunde ngomkhathi wonke nemvelaphi yawo. Kusukela ekusebenzeni kwesimiso sonozungezilanga, kuya kuzici zawo wonke amaplanethi, kudlula imithala ebaluleke kakhulu nokugwema izimbobo ezimnyama. Ungaphuthelwa umlingo we-Astronomy bese ujoyina ulwazi lwendawo!
Isithombe sembobo emnyama emthaleni wethu
Por IsiJalimane Portillo kwenza Amaminithi angu-12 .
Eminyakeni emithathu edlule, umphakathi wesayensi we-Event Horizon Telescope (EHT) umangaze umhlaba ngesithombe sokuqala se…
Ikhala kanjani imbobo emnyama?
Por IsiJalimane Portillo kwenza Amahora we-4 .
Imbobo emnyama enkabeni yeqoqo lomthala iPerseus ihlotshaniswe nomsindo kusukela ngo-2003…
Por IsiJalimane Portillo kwenza Izinsuku ze-6 .
UStephen Hawking, Yuri Milner kanye noMark Zuckerberg bahola ibhodi yabaqondisi ohlelweni olusha olubizwa ngeBreakthrough Starshot,...
Por IsiJalimane Portillo kwenza Amaviki angu-2 .
Uma sikhuluma ngezinkanyezi, isimiso sonozungezilanga namaplanethi, sihlala sikhuluma ngomjikelezo. Nokho, akubona bonke…
Siphila eplanethini engaphakathi kwesimiso sonozungezilanga, yona ezungezwe abanye...
ukuthi isibonakude sisebenza kanjani
Por IsiJalimane Portillo kwenza Amaviki angu-3 .
Isibonakude kwakuyinto esunguliwe eyaguqula ulwazi lwesayensi yezinkanyezi kuwo wonke umlando. Ukusebenzisa i-…
Kungani sihlala sibona uhlangothi olulodwa lwenyanga?
Sonke siyazi ukuthi iNyanga ihlala isikhombisa ubuso obufanayo, okungukuthi, sisuka eMhlabeni asikwazi...
Por IsiJalimane Portillo kwenza Izinyanga ze-4 .
Siyazi ukuthi iplanethi yethu inezinhlobo eziningi zokunyakaza kwesistimu sonozungezilanga. Enye ebaluleke kakhulu futhi leyo…
Ebusuku basentwasahlobo nasekuqaleni kwehlobo, noma yimuphi umuntu obukele endaweni esenyakatho ye-Earth uzoqaphela ...
Por IsiJalimane Portillo kwenza Izinyanga ze-5 .
Iziphepho zelanga ziyizenzakalo ezenzeka njalo elangeni ngezikhathi ezithile. Zivame ukuba ngezikhathi ezithile futhi ...
Siyazi ukuthi isimiso sonozungezilanga asipheli ngokuqondile uma sesidlulile umjikelezo weplanethi i-Pluto….
Amaqoqo ezinkanyezi esibhakabhakeni
Ukunyakaza komhlaba: ukuzungezisa, ukuhumusha, ukuqala kanye ne-nutation
Umbono wePanspermia uyini umsuka wokuphila?
I-Fases de la luna
I-Big Bang Theory
Iyini futhi isebenza kanjani imfundiso yokuziphendukela kwemvelo emhlabeni?
Ikhalenda Lunar 2018